Nhau - Maitiro ekutonga mashandiro eiyo UV Flatbed Printing Machine
Mukuvandudzwa kwazvino kwe UV flatbed printa musika kwemakore mazhinji, pane misiyano mikuru mumutengo wemuchina.Paunenge uchisarudza UV flatbed printa, ita shuwa kuti unzwisise muchina uyu.A yakanaka UV flatbed printer, mune emuchina zvikamu uye software zvivakwa. kune humwe vimbiso yemhando yepamusoro uye ine mutengo wakakwira wekudyara.
Mune indasitiri, yakanaka UV flatbed purinda furemu kuzadzisa ese-simbi yekubatanidza muviri, kuona kuti mukuita kwekushandisa, chikuva chemuchina kwenguva yakareba hachikanganise. Iyo gwara njanji nemota zvinoshandiswa zvese zvakanaka- anozivikanwa mabhurandi kana zvigadzirwa zvinobva kunze.Iye bhureu zvakare iri kiyi node mune yekudhinda maitiro.Mamwe mabhizinesi kuitira kudzikisa mutengo uchave wakashata, izvo zvinokanganisa zvakananga kudhinda mhedzisiro yemuchina uye yekugadzira mitengo.
Tinogona zvakare kutonga kwakazara kuita kwemuchina kuburikidza neyakadhindwa bvunzo yemuchina, uye kudhinda kurongeka kwe UV flatbed printer chiratidzo chakanaka muindasitiri.Can kuprinta fonti yakanaka, inogona kudhinda diki diki fonti pasina kunamira pamumvuri, Printa mutsetse mumwe chete nenzira dzakasiyana kuona kana paine zvisirizvo.Iyo yakanaka UV flatbed purinda inogona kuve mune imwe nzvimbo neakasiyana kunyatso.uye mune yekuenderera kwekudhinda, iko kudhinda kwechakanaka. UV flatbed muchina haanonoke.
NTEK UV purinda, uchishandisa maindasitiri-giredhi Ricoh kamwene, yekudhinda mhedzisiro yakagadzikana, yakajeka ruvara, yakanaka mufananidzo mufananidzo, UV yekudhinda indasitiri sarudzo yekutanga